उहाँको खजाना लागि परमेश्वरको मानिस — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
आफ्नो धन लागि परमेश्वरको मानिस एक मा सबै कुराहरू छ. धेरै साधारण सम्पत्तिहरू उहाँलाई अस्वीकार हुन सक्छ, वा उनलाई छ उहाँले अनुमति दिएको छ भने, तिनीहरूलाई को आनन्दको त्यसैले तिनीहरू कहिल्यै आनन्द आवश्यक हुनेछ भन्ने स्वभावका गरिनेछ. वा उहाँले तिनीहरूलाई जान हेर्न पर्छ भने, एक एक पछि, उहाँले मुशकिल से हानि महसुस हुनेछ, सबै कुराको स्रोत भएको लागि उहाँले एक सबै सन्तुष्टि मा छ, सबै खुशी, सबै आनन्द. उहाँले वास्तवमा केही गुमाएको छ गुमाउन सक्छ जेसुकै होस्, उहाँले लागि अब एक मा यो सबै छ, र त्यो विशुद्ध छ, वैध र सधैंभरि.
A.W. Tozer, परमेश्वरको धावक
kelleyR • अगस्ट 19, 2013 मा 9:04 छु • जवाफ